Wararka Maanta: Jimco, Aug 31, 2012-Barnaamijka Dareenka shacabka oo falanqeyn ku sameeyey doorashadii GBDFS ee ka dhacdey mugdisho. (Daawo)
Barnaamijka Dareenka shacabka oo falanqeyn ku sameeyey doorashadii GBDFS ee ka dhacdey mugdisho. (Daawo) Jimco, 31-ka Agoosto 2012(HOL): Barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga ee ka baxa Hctv oo falanqeyn ku sameeyey sidii ay u dhacdey doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya taasoo ka dhacdey magaalada mugdisho.
Sidoo kale barnaamijku waxuu dood ka sameeyey xildhibaanadii loo diidey ineey ka mid noqdaan golaha baarlamaanka xaalkoodu halka uu marayo iyo weliba xildhibaan ka tirsan DFS oo la sheegay inuu ku xiran yahay magaalada mugdisho si sharci daraa,
Qodabadaas oo dhan ayaa lagu falanqeyn doonaa barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga ee todobaadkan ee daawasho wanaagsan.
Jimco, Agoosto 31, 2012(HOL): Dagaallada ayaa yimid kadib markii xoogagga Al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda KMG iyo kuwa Kenya ku lahaayeen deegaan lagu magacaabo Miido oo qiyaastii 30 KM u jira magaalada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Doorashada Madaxweynenimada Soomaaliya oo dhaceysa 10-ka September 8/31/2012 12:38 PM EST